Fiangonana Archives - Page 4 sur 4 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Herintaona izao no lasa… Ny Komitin’ny Synodam-paritany FLM Eoropa (KMSPE) izay nivory ny 24 sy 25 septambra 2016 dia nanapa-kevitra fa hotendrena hitondra Fileovana ao Ile-de-France ny Pastorantsika Mpitondra Fitandremana eto an-toerana, Pastora RASETA. Pastora RASETA dia natolotry ny Fileovana Paris ho Mpitondra Fitandremana Orléans taorian’ny fotoana lavalava tsy nisiana Pastora teto an-toerana. Telo taona no nitondrany …
Misaotra an’i Jesosy isika Fiangonana FLM Orléans fa nomeny iny taona lasa iny indray, nanehoany antsika ny fitiavany sy ny famindrampony tamintsika, ary nandrotsahany tamintsika ny Fahasoavany. Hiditra taom-baovao indray isika ankehitriny, ka ny laharana fahatelo amin’ny Perikopa no anjarantsika mandritra ny taom-piangonana. Noho ireo Antony ireo dia hankalaza ny Fetin’aina tahaka izay efa natomboka …
Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017
Madagasikara sy ny Malagasy hoentina am-bavaka. Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017. Fiombonam-bavaka ny Alahady 25 jona 2017 ho an’ny Tanindrazana. Katekista RAJOHARISON Maurice, Raiamandreny eto an-toerana no nanao ny vavaka nihalohavan’ny hira FFPM 734 ary niarahan’ny Fiangonana manontolo namarana tamin’ny Hataky ny Tompo 734 – Zanahary ô tahio ny …